The Livelihoods and Food Security Fund (LIFT) Sounds Alarm at Worsening Humanitarian Situation in Yangon | United Nations in Myanmar
The Livelihoods and Food Security Fund (LIFT) Sounds Alarm at Worsening Humanitarian Situation in Yangon
The escalating violence and imposition of martial law in six Yangon townships has deeply affected LIFT’s peri-urban programmes and is constraining the delivery of essential support and services.
Unprecedented economic hardships drive thousands of workers to despair …
The situation in Yangon has takenadramatic turn for the worse as thousands of families face growing insecurity and are subject to erratic and random violence. At the same time the impact of protracted income cuts, surging food prices, halted health services and lack of remittances take their toll.
Many garment factories,acritical source of urban livelihoods for hundreds of thousands of women, have ceased operations with major markets cancelling orders and disruptions being experienced in raw material supply chains. Several of the largest brands sourcing from Myanmar have announced that they will stop all further orders.
Furthermore, several factories have been burned and vandalized leaving thousands of people with no income prospects.
There are also increasing reports of poor treatment of workers in factories, including locking workers inside factories to prevent from protesting and refusal to pay full wages.
Deadly crackdowns on 13 March left 21 persons dead in just one day. With unprecedented economic hardships and growing insecurity, thousands of workers are leaving the city or remain to face chaos and socio-economic misery. Food shortages and food price spikes have already been reported across many townships of Yangon, particularly those under martial law. Coupled with market closures and hindered access to healthcare facilities, this is expected to lead to sharp increases in acute malnutrition among the most vulnerable groups of population.
… while key service providers are disabled
Most of LIFT’s essential support and services in Yangon is delivered through non-governmental organizations and civil society organizations (CSOs). Following the military takeover, many of these organizations have paused or limited their activities while they assess the risks, ensure the safety of their personnel and adjust the programmes to the changing context. This has disrupted critical work that was actively improving working conditions and nutrition of individuals living in these areas of Yangon.
Meanwhile, disruptions in the banking sector have resulted inaliquidity crisis for organizations’ operations and the intermittent communication connectivity - telephone and internet - has hindered the remote management of activities.
While the majority of LIFT’s partners have shifted their activities to provide and expand humanitarian support, psychosocial and legal counselling to migrants and workers, the de facto authorities are taking measures to restrain some of these organizations, including issuing warrants for staff and instructing banks to submit details of the financial transactions of NGO bank accounts since 1 April 2016.
LIFT-supported labour organizations, who have been at the vanguard of decent work efforts, are forced to suspend nearly all their activities.
While thousands of people are in desperate need of assistance, LIFT’s partners are under distinct pressure.
LIFT and partners are mobilizing to provide humanitarian support, including food assistance and cash transfers to workers experiencingaloss of livelihood in Yangon. This should be combined with psychosocial counselling services to workers and emergency medical treatment to CSO staff and others traumatized during the recent crackdowns. LIFT will also support dialogue with international brands to get their suppliers to act responsibly, while increasing legal assistance services for affected workers.
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း လူသားချင်း စာနာမှု ဆိုင်ရာ အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားလာမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် စားနပ်ရိက္ခာ ဖူလုံရေးရန်ပုံငွေ (LIFT) က သတိပေးပြောကြား
အကြမ်းဖက်မှုများ ပိုမိုများပြားလာခြင်းနှင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ် ခြောက်မြို့နယ်တွင် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာ ခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့် LIFT ၏ မြို့ပြဒေသ စီမံကိန်းအစီအစဉ်များအား အကြီးအကျယ် ထိခိုက်လျက်ရှိပြီး မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော ပံ့ပိုးကူညီမှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ရာတွင် အကန့်အသတ် ဖြစ်စေပါသည်။
မကြုံစဖူးဆိုးရွားသည့် စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းများကြောင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော အလုပ်သမားများ၏ မျှော်လင့်ချက်များ ပျက်သုဉ်းစေခြင်း …
ထောင်ပေါင်းများစွာသော မိသားစုများ၏ လုံခြုံမှုကင်းမဲ့နေခြင်းမှာ ပို၍ ပို၍ ဆိုးရွားလာနေပြီး အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ရမ်းသမ်းပြုမူသော အကြမ်းဖက်မှုများ ခံစားနေကြရသဖြင့် ရန်ကုန်မြို့အခြေအနေမှာ အဆိုးဘက်သို့သာ သိသိ သာသာ ဦးတည်နေပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် ကာလရှည်ကြာဖြစ်လာသည့် ဝင်ငွေ လျော့နည်းလာခြင်း၊ စားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ တရှိန်ထိုး မြင့်တက်လာခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှုများ ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်းနှင့် ငွေလွှဲပေးပို့မှုများ မရှိတော့ခြင်းတို့က ရန်ကုန်မြို့နေ ရပ်ရွာလူထု၏ အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားစေလျက် ရှိပါသည်။
အမျိုးသမီး ထောင်ပေါင်းများစွာ အတွက် အရေးပါသော မြို့ပြဒေသ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ရင်းမြစ်ဖြစ်သည့် အထည်ချုပ်စက်ရုံ အများအပြားမှာ အဓိကမှာယူနေသော ဈေးကွက်များမှ အမှာစာများ ဖျက်သိမ်းသွားခြင်းနှင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း စီးဆင်းမှုများ ပြတ်တောက်သွားခြင်းတို့ ကြုံတွေ့ရသဖြင့် လုပ်ငန်းများလည်ပတ်နိုင်မှုမရှိဘဲ ရပ်ဆိုင်းသွားပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကုန်ပစ္စည်းများ မှာယူနေသည့် နာမည်ကြီး ကုန်အမှတ်တံဆိပ် အများအပြားက ထပ်မံ မှာယူခြင်း မပြုတော့ဘဲ အားလုံးရပ်ဆိုင်းသွားမည့်အကြောင်း ကြေညာခဲ့ပါသည်။
ထိုမျှမက စက်ရုံအများအပြား မီးလောင်ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခံရခြင်းတို့ကြောင့် ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတို့၏ ဝင်ငွေရလမ်းများ ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရသည်။
အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြခြင်းအား ဟန့်တားနိုင်ရန်အလို့ငှာ စက်ရုံများအတွင်း အလုပ်သမားများအား ပိတ်လှောင်ထားခြင်း နှင့် လုပ်ခလစာ အပြည့်အဝပေးရန် ငြင်းဆန်ခြင်းတို့ အပါအဝင် စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိ အလုပ်သမားများအား ဆိုးရွားစွာ ဖိနှိပ်ဆက်ဆံခြင်းများမှာ များပြားလာလျက်ရှိကြောင်းကိုလည်း ကြားသိရ ပါသည်။
မတ်လ ၁၃ ရက်နေ့ တစ်ရက်တည်းတွင်ပင် အင်အားအလွန်အကျွံသုံးပြု၍ အကြမ်းဖက်နှိမ်နှင်းမှုများကြောင့် သေဆုံးသူ ၂၁ ဦးအထိ ရှိခဲ့ပါသည်။ မကြုံစဖူး ဆိုးရွားသည့် စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းများ နှင့် လုံခြုံမှု ကင်းမဲ့ နေခြင်းများ ပိုမို ဆိုးရွားလာသဖြင့် အလုပ်သမားထောင်ပေါင်းများစွာတို့သည် ရန်ကုန်မြို့မှ စွန့်ခွာနေကြခြင်း (သို့) အထိန်းအကွပ်မရှိ ဖြစ်နေသည့် အခြေအနေများ နှင့် လူမှုစီးပွားဒုက္ခများကို ခါးစည်းရင်ဆိုင်ရန် ဆက်လက် နေထိုင်နေရခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်နေပါသည်။ အထူးသဖြင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကြေညာထားသည့် မြို့နယ်များတွင် စားနပ်ရိက္ခာများ ပြတ်လပ်မှုနှင့် စားသောက်ကုန် ဈေးနှုန်းများ မြင့်တက်လာလျက် ရှိပါသည်။ ဈေးများ ပိတ်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုပေးသည့် ဌာနများသို့ လက်လှမ်းမီရန် အခက်အခဲဖြစ်နေခြင်း တို့က ထပ်မံ ဖိစီး စေသောကြောင့် လူထုအတွင်းရှိ အားနည်းထိခိုက်လွယ်မှု အများဆုံး ရှိသည့် အုပ်စုများတွင် အာဟာရချို့တဲ့မှု ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းဆီသို့ ဦးတည်စေမည် ဟုလည်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
… အဓိက ဝန်ဆောင်မှု ပေးသူများ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းမရှိတော့သည့် အခြေအနေ
ရန်ကုန်မြို့အတွင်း LIFT က ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့် အရေးပါသော အထောက်အပံ့များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ အား အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့ အစည်းများနှင့် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ (CSOs) များမှ တဆင့် ပေးအပ်ပါသည်။ စစ်တပ်မှ အာဏာ သိမ်းယူပြီးနောက် အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် ဆုံးရှုံးရနိုင်ချေ ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ၎င်းတို့၏ ဝန်ထမ်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု ရှိစေရန် ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲသွားသည့် အခြေအနေတွင် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ အား အံဝင်ခွင်ကျ ဖြစ်စေရန် ချိန်ညှိခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းများ ခေတ္တ ရပ်ဆိုင်းခြင်း (သို့) စီမံကိန်းများ ကန့်သတ်လျှော့ချခြင်းတို့ ခဲ့ရသည်။ ထိုအခြေအနေများသည် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အဆိုပါ ဧရိယာများတွင် နေထိုင်သည့် ပြည်သူလူထု၏ လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ နှင့် အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ ပိုမို ကောင်းမွန်လာစေရန် တက်တက်ကြွကြွ ဆောင်ရွက်နေသည့် အရေးပါသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား အဟန့်အတားများ ဖြစ်စေခဲ့သည်။
ဤအချိန်အတောအတွင်းမှာပင် ဘဏ်လုပ်ငန်းများ ကမောက်ကမဖြစ်ခြင်းသည် အဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ငန်း လည်ပတ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် ငွေကြေးအကျပ်အတည်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။ တယ်လီဖုန်း နှင့် အင်တာနက် ဆက်သွယ်မှုများ ပြတ်တောက်ခြင်းတို့သည်လည်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား အဝေးရောက်စနစ်ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲနေရခြင်းကို အခက်အခဲများ ဖြစ်စေပါသည်။
LIFT ၏ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အများစုတို့က ရွှေ့ပြောင်း‌သွားလာသူများ နှင့် အလုပ်သမားများ အတွက် လူသား ချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဥပဒေရေးရာ အကူအညီပေးခြင်း တို့အား တိုးချဲ့ ပံ့ပိုးပေးရန် ၎င်းတို့ ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအား လိုက်လျောညီထွေပြောင်းလဲနေစဉ်အတွင်း အာဏာသိမ်းယူထားသည့် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ မှ အဆိုပါ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းအချို့၏ ဝန်ထမ်းများအား ဖမ်းဆီးမိန့်များ ထုတ်ခြင်း နှင့် NGO ဘဏ်စာရင်း များမှ ငွေသွင်းငွေထုတ်စာရင်းများအား ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဧပြီလမှ စတင်၍ အသေးစိတ် တင်ပြရန် ဘဏ်များအား ညွှန်ကြားခြင်းတို့ အပါအဝင် အဆိုပါ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း အချို့အား ထိန်းချုပ်ကန့်သတ်နိုင်မည့် အစီအမံများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
သင့်တင့်လျောက်ပတ်သည့် အလုပ်အကိုင်များ ပေါ်ထွန်းလာစေ‌ရေး ကြိုးပမ်းမှုများတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု နေသည့် LIFT မှ ထောက်ပံ့ပေးထားသော အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့ ဆောင်ရွက်နေသည့် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများ အားလုံးနီးပါးအား အာဏာသုံး၍ အတင်း အဓမ္မ ရပ်တန့်စေခဲ့ပါသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူလူထုတို့မှ အကူအညီများ အသည်းအသန်လိုအပ်နေချိန်တွင် LIFT ၏ မိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းများမှာ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖိအားပေးမှုများ ကြုံတွေ့နေကြရပါသည်။
LIFT နှင့် မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများသည် ရန်ကုန်ရှိ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု ဆုံးရှုံးသွားသည့် အလုပ်သမား များအတွက် စားနပ်ရိက္ခာ နှင့် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုများ အပါအဝင် လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာ အကူအညီများ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ ယင်းတို့တွင် အလုပ်သမားများအတွက် လူမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကူအညီများ၊ CSO ဝန်ထမ်းများနှင့် မကြာသေးမီက အကြမ်းဖက် ဖြိုခွဲနှိမ်နင်းမှုများအတွင်း စိတ်ဒဏ်ရာ ခံစား ခဲ့ရသူ များ အတွက် အရေးပေါ် ကုသမှုများ ပေါင်းစပ် ပါဝင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ LIFT အနေဖြင့် ထိခိုက်ခံစားရသည့် အလုပ်သမားများအတွက် ဥပဒေ ရေးရာ အကူအညီများ တိုးမြှင့်ပေးအပ်မည်ဖြစ်ပြီး တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံတကာ ကုန်ပစ္စည်း အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား ၎င်းတို့၏ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများမှ တာဝန်သိစိတ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ဆွေးနွေးနိုင်ရန်လည်း ကူညီပံ့ပိုးပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။